February 8, 2018 – Arakan Times
ရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်များကို ရခိုင်ကျောင်းဆရာတဦးမှ ပညာဆက်လက်သင်ကြားခွင့် မပေး
February 8, 2018	Leaveacomment 173 Views
AT Burmese 8 Feb 2018 ဘူးသီးတောင်၊ တောင်ပိုင်းညောင်ချောင်းအထကကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကျောင်းဆရာဦးကျော်သန်းသည် ရိုဟင်ဂျာကျာင်းသားများကို ကျောင်တက်ခွင့်မပေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျောင်းသားများကို ကုလားဟုသုံးနှုန်းကာ ဆဲဆိုခြင်း၊မတရားသဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ ၂၀၁၆၊၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် တွင်၆တန်းအောင်မြင်၍ ၇တန်းသင်ရမည့်ကျောင်းသား ၂၀ ကျော်ကို ကျောင်းစာရင်းသွင်းချိန်တွင် ကျောင်းမှတ်တမ်းတွင်နာမည်မပါရှိဟုပြောဆိုကာ ကျောင်းတက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါ။ တချို့ကိုငွေကျပ် ၅သောင်းစီယူကာ ၆တန်းတွင် ပြန်လည်သင်ခွင့်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ အများစုကို ထိုကျာင်းမှ ကျောင်းသားမဟုတ်ဟု ပြောဆိုပြီး ကျောင်းတက်ခွင့်မပေးခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး တပိုင်းတစဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါသည်။ ဆရာကျော်သန်းဆိုသူသည်စစ်တွေဒေသခံဖြစ်ပြိး ညောင်ချောင်းအထကကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်မှာ ၁၅ နှစ်ထိရှိလာပြိး ဝါရင့် ကျောင်းဆရာအနေဖြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးနေရာတွင်အာဏပြလုပ်ဆောင်လာနေကြောင်းသိရပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကတော့ကျောင်းဖွင့်ချိန်နှင့် နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ၊အခန်းဆုံးစာမေးပွဲချိန်တွင်သာ ကျောင်းသို့လာရောက်တတ်ပြီး ကျန်အချိန်တွင် ကျောင်းသို့လာရောက်ခြင်း မရှိကြောင်းသိရပါသည်။ လက်ရှိတွင် ရွာတွင်းနေထိုင်ပြီး ကျောင်းလုံးဝတက်ခွင့်မရသော ကျောင်းသားများမှာ ၁။မာမတ်ယာဆဲရ်(ဘ)ဇော်ကိရ်အာမတ် ၂။အီဆုပ်(ဘ)ဂူလာမ်ရှော်ရိဖ် ၃။အာနိုဝါရ်ဆာဒဲက်(ဘ)အီလီယာစ် ၄။အီလီယာစ်(ဘ)ကူလ္လာများ တို့ဖြစ်ကြပြီး ကျောင်းတက်ခွင့်မရ၍ စိတ်ဓာတ်ကျကာ ...
Ancient mosque annihilated by Myanmar authority in Maungdaw South
February 8, 2018	Leaveacomment 365 Views
February 8, 2018 AT Correspondent, Alaythankyaw An ancient Jame mosque was demolished by Myanmar authority at Oo Daung village tract in Maungdaw south on February 6, 2018. Source said to our correspondent, Myanmar local authority along withagang of Rakhine extremists entered Oo Daung village tract and annihilated with big hammer and also set fire to the mosque. Earlier, ...
Rakhine teacher rejects attendance of Rohingya students
February 8, 2018	Leaveacomment 309 Views
February 8, 2018 AT Correspondent, Buthidaung Rohingya students are being denied of their attendance at middle school of YaunChang village tract in Buthidaung south by Rakhine teacher. According to report,aRakhine teacher U Kyaw Than by name is rejecting the attendance of Rohingya students at school for which the students are expressing their deep concern over it. He has ...